Cryptocurrency ahịa mmepe na 2018 - Blockchain News
Cryptocurrency ahịa mmepe na 2018
N'ihi na egbe nke bitcoin futures na nkwekọrịta na omenala ngwaahịa mgbanwe; oruru nke n'elu a 100 oke ego na ahia cryptocurrencies; na cryptocurrency ahịa capitalization-eru ihe karịrị $500 ijeri na 2017, ọkachamara ziri ezi kwere na nke ugbu a cryptomarket aghọwo ndị kasị-eto eto ma ndị kasị ekwe ụlọ ọrụ nke anyị na ọgbọ. Anyị gbakọtara echiche na amụma nke ọkachamara na isi ụlọ ọrụ Player na cryptocurrency ahịa mmepe na 2018.
The CEO nke Node40, a blockchain oha na cryptocurrency tax nnabata na ụlọ ọrụ, Perry Woodin ekwere na 2018 ga-afọ nke uka oha maka cryptocurrency.
Ọ na-aga ịbụ ndị afọ mgbe ọ bụla enyi na ikwu ga-achọ ịma otú ihe i nwere na otú ịzụta ya, kwuru Woodin.
O doro anya na a ga-enwe a ịrị elu na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eji cryptocurrencies. Jonathan Sela, SVP azụmahịa mmepe nke props site YouNow, nke na-eji blockchain iwu a media ilekota, eme atụmatụ na site na njedebe nke 2018, anyị ga-ahụ n'elu 50 nde mmadụ n'ụwa nile na-ejide dịkarịa ala otu cryptocurrency. Mgbe nnyocha ọhụrụ ndị na London Block Exchange (LBX) ka kwubiri na site na njedebe nke 2018 otu na atọ Millennials ga nyekwara n'ime kaadị ahịa.
The mkpebi nke omenala ngwaahịa mgbanwe CBOE na CME depụta bitcoin futures na nhọrọ contracts mere mbụ cryptocurrency nke ụwa na, eleghị anya anya, ọzọ cryptocurrencies, a ọhụrụ akpan owo klas yiri oké ọnụ ahịa ọla, ike ego, ọchịchị nkekọ, na ọtụtụ ndị ọzọ na akụ na ala. N'ihi ya, n'afọ ọzọ ọnọdụ nke cryptocurrencies ga-abụ ihe ziri ezi na ndị na-achị ego na usoro iwu. Simon YU, CEO nke StormX, mbak a na nkwupụta. Ọ bụ n'aka na 2018 ga-abụ otu nke kasị mma afọ maka cryptocurrency na-asọ ahịa ka a ọhụrụ larịị.
Ruo ugbu a ọ na-isi retail investors pushing price nke bitcoin na ndị ọzọ na cryptocurrencies. Na a futures ahịa na nhọrọ belata ihe ize ndụ na profaịlụ, ọzọ institutional investors ga-adị ike ịmalite jumping na. Ma na ego ngwá, anyị nwere ike ịhụ puku ijeri dollar na institutional ego eruba na-esote afọ ole na ole.
Shidan Gouran, President of Global Blockchain Technologies, nwere doro anya na cryptocurrency ga-ahụ ọbụna ihe ịrịba rụzuru na mmiri na 2018.
“Mgbe a ịrịba pasent nke n'ji bi a na ma site na iji ma ọ bụ na, opekempe, -ala na cryptocurrencies, otu ike ma sị of ọchịchị na òtù. Nke a bụ ga-atụ anya, dị ka òtù, ma ọha na onwe, agbasaghị nwere ogologo mmụta arụchi na n'ịkpa ọhụrụ teknụzụ. Anyị chọpụta na a mmụta usoro ga-ihe bụ isi cryptocurrency na blockchain tolite na 2018, imeri ọtụtụ n'ime ihe mgbochi ndị na-gbochiri ọha na institutional itinye aka na a okirikiri. Nke a ga-eme ka onye ọ bụla na na na na otu peeji nke, ukwuu ọgaranya nwere nke teknụzụ ndị a na òkè nke akpa entities, akpọchi arụmọrụ na-agaghị ekwe omume ma. N'agbata iso institutional ulo oru mbo ke cryptocurrencies, àjà nke bitcoin dabeere futures, na gọọmenti na-amalite na-arụ ọrụ na ha onwe ha blockchain oru, e na-ama mgbaàmà nke teknụzụ ndị a ini enye okụtde ke na ọha na eze na institutional etoju. anyị, Ya mere, ekwu na 2018 ga-ahụ nyere ibu na mkporo, ewu na ẹdude ọganihu ụbọchị site n'ịnabata ọhụrụ nketa oke”.
Dị ka CEO nke Biddable Mark Lurie, ọtụtụ investors ga-elekwasị anya na ọzọ cryptocurrencies, tinyere litecoin, gbaara, na iota, kama bitcoin ma ọ bụ ether. Lurie ekwere na na ịkwụsị, na 2018, e-aga na-a siri ike push n'ebe diversifying cryptoassets na kaadị ego management ga-edozi ụzọ investors anya na omenala akụ na ịkwụsị.
Mike doo, CEO nke kaadị Company, kwuru na obere volatility na Bitcoin ga-emetụta na ọzọ cryptocurrencies na anyị ga-ahụ na ịrị elu nke ala tokens. Ọ na-ebu amụma a ahịa okpu $5 puku ijeri site na njedebe nke afọ.
dmitriy Zhulin, Co-nchoputa nke ins ilekota, na-atụ anya na ka blockchain technology-aga n'ihu na-enwe mmetụta, bitcoin ga-eto ruo ihe dị ka $30-40,000 na 2018 dabere na ya na mma na ihe ọzọ doro dị ka a n'aka ugwo na ego ichebe. Ọzọkwa, Trevor Koverko, na President of Canadian ụlọ ọrụ Polymath, ekwere na Bitcoin ga iputa dị ka a na ugwo netwọk.
“Ugbu Bitcoin a na-eji dị ka a ada akpan owo na ụlọ ahịa nke uru. Ma, dị ka egbuke gburugburu ngwọta dị ka àmụmà network iputa ( Bitcoin dabeere na netwọk, na-enye ohere ka ndị ọrụ na-eme ka ihe na-akparaghị ókè ọnụ ọgụgụ nke micropayments - DeCenter), bitcoin si na ịba uru n'ụzọ dị ịrịba ama na-amụba na ya price. The ezigbo ajụjụ bụ ọ ga-ahụ bitcoin 'isi yinye’ nke nwere obi ike ịmụta a upgrades ma ọ bụ ọ ga-ọzọ yinye ka Bitcoin Cash?”
Cryptocurrency ahịa mmepe
7 Best Blockchain Development Training, Ọmụmụ na Certifications
Ihe Anyị Maara banyere Cryptocurrency gram na Telegram ICO
Binance & LCX ČR ...
Next Post:Olee otú blockchain technology ịzụlite 2018?